Shir looga hadlayay Horumarinta dhaqaalaha oo ka furmay Kampala - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Shir looga hadlayay Horumarinta dhaqaalaha oo ka furmay Kampala
Shir looga hadlayay Horumarinta dhaqalaha iyo Cafiska Deemaha ee lagu leeyahay Soomaliya ayaa wajiigsa labaad ka furmay Magaalada Kampala ee Dalka Uganda .
Shirkaasi oo ahaa wajiga labaad ee shirka horumarinta dhaqaalaha iyo cafiska deemaha lagu leeyahay Soomaaliya , shirkan oo wajigiisii koowaad ka dhacay bisha September magaalada Addis Abab ee Dalka itoobiya .
Shirkaasi ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiirka maaliyadda XFS, wasiirada dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka Gobolka Banaadir oo ku matalaayay Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banadir.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle ayaa ku bogaadiyay Wasiiradda maamul goboleedyadda in ay la yimaadaan qorshe horumarin kara hanaanka dhaqaallaha Soomaaliya.
Previous articleRa’iisul wasaaraha Yahuuda oo dacwado lagu soo oogay
Next articleDuulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi oo dib u billowday